Yaa ka danbeeya dilka guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa ka danbeeya dilka guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan?
Waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu dilay, Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Ibraahim Macow, kaas oo maanta lagu aasay gudaha Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya- Dabley bistoolado ku hubeysan ayaa fiidnimadii xalay degmada Wadajir ku dilay, alle ha u naxariistee gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Ibraahim Macow.
Guddoomiyaha ayaa markii la dilayey ka soo baxay saaladda cishe, ee xilliga Muqdisho, waxaana kooxdii dishay, ay rasaasta kaga dhufatay qeybaha sare ee jirkiisa.
Kooxdii dilka gaysatay ayaa goobta ka baxsatay, iyadoo masuuliyadda weerarka ay sheegteen Al-Shabaab, kuwaa oo ku eeddeeyey inuu qeyb ka ahaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, maadaama uu u sharaxnaa kursi xildhibaan.
Maanta ayaa lagu aasay gudaha Muqdisho, waxaana aaskiisa ka soo qeyb galay masuuliyiin ka tirsan labada golle ee dowladda iyo ehelkiisa.
Booliska Soomaaliya oo aaska marxuumka tagay, ayaa warbaahinta u sheegay in ay howl-gallo ka sameeyeen goobtii lagu dilay marxuumka, iyagoo xusay in ay ku raad joogaan kooxdii falkaasi ka danbeysay.
Muqdisho maal-mihii ugu danbeeyey waxaa faraha ka baxay amniga, mana jirto cid ka jawaabeysa falalka amni darro ee ka dhacaya caasimadda, iyadoo muran badana uu ka taagan yahay cida iska leh masuuliyadda amniga magaalada.